Dowladda Soomaaliya oo shaacisay kiisas Cusub oo Coronavirus ah - Awdinle Online
Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay Dad Cusub oo laga helay Cudurka halista ah ee COVID-19, kadib markii lagu sameeyay baaritaano kala duwan.
Warbixin ay soo saartay Wasaaradda Caafimaadka ayay ku sheegtay in 5-tii maalin ee lasoo dhaafay Cudurka laga baaray 2,432, isla markaana 44 qof oo kamid ah dadkaas laga helay Cudurka, ayna galeen xaalad karantiil ah.
Dhammaan dadka laga helay Cudurka ayaa ku sugan deegaanada Somaliland, waxaana 34 kamid ah dadkaas ay yihiin Rag, halka 10-ka kalena ay yihii Dumar, waxaana Cudurka u geeriyooday 2 qof uu ku dhacay.
Sidoo kale Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya aaya sheegtay in maalmihii lasoo dhaafay ay Cudurka halista ah ee COVID-19 ka bogsadeen 19 ruux oo horey looga helay Cudurkaas.
Tirada Guud dadka uu ku dhacay Xanuunka COVID-19 ayaa gaartay 3,941 qof, waxaana ka bogsaday 3,185 ruux, isla markaana gudaha Soomaaliya ay ugu geeriyoodeen 104 qof, sida ay shaacisay Wasaaradda Caafimaadka dowladda.
Previous articleGuddoomiye Waaxeed lagu dilay Muqdisho
Next articleMadaxweynaha Galmudug oo la kulmay Wakiilka QM